Home News Madaxweynaha Hirshabeelle oo Muqdisho dib ugu soo noqday, iyo saxaafadda oo loo...
Madaxweynaha Hirshabeelle oo Muqdisho dib ugu soo noqday, iyo saxaafadda oo loo diiday (Akhriso)
Waxaa maanta ka soo degay garoonka Adan Cadde Madaxweynaha maamulka HirShabelle oo ka soo laabtay shirkii maamul goboleedyada ay ku yeesheen magaalada Kismaayo. Waxaa garoonka ku soo dhaweeyay in ka badan 50 xildhibaan.
Maamulka Garoonka Cabdi Ashkir ayaa u diiday dhamaan saxaafadii timid garoonka si ay u tebiyaan imaanshaha Madaxweynaha HirShabeelle waxaana halkaa ka dhacay buuq iyo is qabqabsi. Cabdi Ashkir ayaa u sheegay xildhibaanada in uu qabo amar sare in aanan loo ogolaan saxaafadda in aay tebiyaan Madaxweynaha HirShabeelle.
Madaxweyne Waare ayaa kula dardaarmay xildhibaanada iyo madaxda xisbiyada in aay is ilaaliyaan amnigooda ka taxadaraan, waxaa uu sheegay in wadanka uu ka bilowday qaab kali talisnimo ah oo la rabo in la afqabto qof walba oo ka soo horjeeda siyaasadda kooxda la magac baxday Nabad & Nolol.
Previous articleCabdala Cabdala Oo Laga Hor Istaagay inuu Ka Dhoofo Garoonka Diyaaradaha Ee Aadan Cade
Next articleCiidamada Eriteriya oo ku biiraya AMISOM oo Muqdisho loo soo wado (Sababta)
Axmed Ismaaciil Samatar oo weerar Afka ah ku qaaday Xukumada Muuse...